uKhuzani obishini ngokulingisa uShenge - Ilanga News
Home Izindaba uKhuzani obishini ngokulingisa uShenge
KUMSHUBELE umculi kamasikandi uKhuzani “iNdlamlenze” Mpungose (osesithombeni) ozifake obishini nge-video ayiqopha elingisa iNkosi uMangosuthu Buthelezi, wayisabalalisa ezinhlakeni zoku-xhumana njengoba lokhu kuthiwa uShenge ukuthathe njengokweyi-swa okuphindiwe.
Ngokuthola kweLANGA , iNkosi uButhelezi ifake isikhalo kuSihlalo weNkatha Freedom Party (IFP) KwaZulu-Natal, uMnu Thamsanqa Ntuli ophinde abe yimeya yase-Nkandla lapho kudabuka khona iNdlamlenze.
UMnu Ntuli kuthiwa lesi sikhalo usesidlulisele ebukhosini baKwa-Mpungose. Okuqaphelekile wukuthi ngeledlule uKhuzani ubenge-yona ingxenye yomcimbi kamasipala waseNquthu oholwa yi-IFP njengoba bekukhona kuwona
neNkosi uButhelezi kanti nango-Mgqibelo kalikho igama lakhe emacikweni azonandisa emcimbini oseNkandla ozohanjelwa nguShenge.
INkosi Zakhe Mpungose yesizwe sakwaMpungose, eNkandla okwakhele kuyona uKhuzani, ithi kayihambisani nesenzo salo mculi ngoba emlandweni wesizwe
sakwaZulu, kakusiyona into enhle ukulingisa umuntu omdala.
Itshele ILANGA ukuthi lolu daba ilubikelwe yimeya.
“Imeya icele ukubonana nami, yaletha umyalezo njengokubike-lwa kwayo nguMntwana waKwa-Phindangene, yaze yangikhombisa i-video lena,” kusho iNkosi Mpungose.
Itshele leli phephandaba ukuthi seyibhalele incwadi iNkosi uButhelezi, yacela ukubonana nayo okuzothi uma siphumelela isicelo, bese ihambisa uKhuzani KwaPhindangene.
“Ingane yenze iphutha impela esilibonayo, okuzofanele siyolixolisela siyisizwe,” kusho iNkosi Mpungose.
Okhulumela umasipala wase-Nkandla uMnu Mgcobeni Khanyile, akazange aphumele obala ngesizathu sokungafakwa kukaKhuzani kulo mcimbi okuzo-be kukhona kuwona uMthandeni “iGcokama Elisha” Manqele, nabanye.
“Kunesizathu esithile esenze ukuba angabizwa okusamele silungiswe. NgoMgqibelo kuzobe kukhona uShenge eNkandla kuvulwa izakhiwo esizakhele osomabhizinisi abadayisa emgwa-qweni, okuyilapho sizophinde sivule khona indlu esiyakhele umndeni wakwaLanga siwumkha-ndlu,” kusho uMnu Khanyile.
Ekhuluma neLANGA uKhuzani, uthe kakukho okubi abekuqondile ngokulingisa uMntwana waKwa-Phindangene.
“Bengike ngibone belingiselwa abantu abakhulu kwenziwa ngisho ngabasakazi abakhulu, ngacabanga ukuthi kakusiyona inkinga ngoba ekugcineni kwe-video ngiyazithoba ngimuhashe uMntwana waKwaPhindangene, okuyindlela yokukhombisa amandla akhe esizweni sakwaZulu. Ngiyazithoba kakhulu,” kusho uKhuzani.
Previous articleqale phansi indaba yokuqothwa kosomatekisi
Next article‘Ubhokode umfowabo wafa emsola ngobuvezandlebe’